झापाको वन्डर लाईफ एकाडेमीले गर्यो अभिभावक भेला - झुल्केघाम
झापाको वन्डर लाईफ एकाडेमीले गर्यो अभिभावक भेला
July 26, 2020 7:18 PM
झापा, साउन ११ । झापा गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको वन्डर लाईफ एकाडेमीले अभिभावक भेला गराएको छ । एकाडेेेेमीले विद्यार्थीहरुको अभिभावकहरुलाई बोलाई पठनपाठन सम्बन्धी छलफल शुरु गरेको हो ।
नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का कारणले ३ महिना विद्यालय बन्दाबन्दी हुदाँ विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा धेरै नै असर परेकोले अब कसरी कक्षा संचालन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको एकाडेमीका फाउन्डर कुमार सापकोटाले बताए ।
छलफलमा कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीहरुलाई सामाजिक भाैतिक दुरी कायम गरी दैनिक २ घण्टा पढाउने अभिभावक र जनप्रतिनिधिहरुसँग सहमति भएको थियोे ।
छलफलमा विकासप्रेमी तथा लोकप्रिय वडा अध्यक्ष नेत्र बहादुर खड्का, झापा गापा शिक्षक महासंघका सचिव तथा सालमारा प्राविका प्रअ. समसाद आलम, वन्डरलाईफ एकाडेमीका फाउन्डर कुमार सापकोटा, डिल्लीराज मा. वि. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मणिराज गणेश र अभिभावक, शिक्षकहरुको उपस्थिति रहेको थियोे ।
वन्डर लाईफ एकाडेमीको पठनपाठन सुचारु गर्न मुख्य पाँच पक्षहरुबीच सहमति भएको थियोे । विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, स्वास्थ्य र वडाबीच निम्न मापदण्डसहित विद्यालय संचालन गर्न सहमति भएको हो।
१) विद्यालय पक्षले –
क) कक्षा कोठा र विद्यार्थी बस्ने सिट प्लानिङ्ग (दुरी कायम गर्न) र शिक्षकहरुको पठनपाठनको कार्य तालिका तयारी गर्नुपर्नेछ ।
ख) अभिभावकहरुसँग पठनपाठन संचालनबारे संवाद र कोभिड-१९ संक्रमणबाट बच्ने उपायबारे सचेतना कार्यक्रम गर्नु पर्नेछ ।
ग) विद्यार्थी र अभिभावकको मोबाईल वा इमेल ठेगाना सहित समेटिएको अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ ।
घ) गुणस्तरिय स्यानिटाईजर र सो कार्यका लागि प्रयोग गरिने स्यानिटाईजर वा क्लोरिन वा ब्लिचिङ्ग वा भाईरेक्स वा स्वास्थ्य शाखाले तोकेको गुणस्तरिय औषधिको ब्यबस्थापन गर्नुपर्नेछ र कक्षा कोठा स्यानिटाईज गर्ने ।
ङ) साबुनसहित हातधुने स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
च) स्वच्छ पिउने पानी,समय-समयमा पिउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ ।
छ) विद्यार्थीहरुको गतिबिधि वा स्वास्थ्य प्रतिकुलता भए वा नभएको अवस्थाबारे जानकारी गर्ने र सतर्कताबारे ध्यान दिन विद्यार्थीलाई पटक-पटक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
ज) विद्यार्थी एवं शिक्षकहरूको बडी टेम्परेचर (ज्वरो) जाँच गर्ने र प्रत्येक दिनको रिपोर्ट बनाउने।
२)विद्यार्थी पक्षले –
क) मास्क अनिवार्य लगाउने र सामाजिक दुरी (एक-अर्कामा संपर्कित नहुने) कायम गर्नुपर्नेछ ।
ख) समय-समयमा साबुन पानीले हात धुनु र आफ्नो साथमा रहेको वा विद्यालयमा राखिएको स्यानेटाईजरको उचित प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
ग) फोहोर उत्सर्जन नगर्ने र फोहोरको उचित वा तोकिएको स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
घ) चिसोजन्य वा जंग फुड खाना- खाजा खान पाईने छैन ।
ङ) खाजा घर-घरबाटै ल्याउने र आफुले मात्र खानु पर्नेछ ।
च) जथाभाबी हाच्छिँउ गर्न र थुक्न पाइने छैन।
झ) घरबाट-विद्यालय र विद्यालयबाट घरको सोझो यात्रा बाहेकका बजारमा अन्य संपर्क गरिने छैन ।
ञ) घर फर्कि गएपछि लगाएको पोसाक सर्फपानीको बाल्टिमा खोल्ने र केहि समय पछि धुने र अनिवार्य स्नान गर्नु पर्नेछ ।
ट) ज्वरो, रुघाखोकी वा स्वास्थ्य प्रतिकुल भए विद्यालय नआउने र सो को सुचना स्वास्थ्य शाखालाई दिनु पर्नेछ ।
ठ) विद्यालय, अभिभावकको निर्देशन तथा कोभिड-१९ संक्रमणबाट बच्ने मापदण्डको पूर्ण पालना विद्यार्थीले गर्नुपर्ने ।
३) अभिभावक पक्षले –
क) विद्यार्थीले निजि प्रयोग गर्ने मास्क, पञ्जा,स्यानेटाईजर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
ख) घरबाटै खाजा बनाई पठाउनु पर्नेछ ।
ग) प्रयोग भएको पोसाक र ब्याग सरसफाई वा संक्रमणबाट सुरक्षित गरिदिनु पर्नेछ ।
घ) घरबाट विद्यालयसम्म जाने र फर्कि आउने अवस्थासम्म पूर्ण निगरानी राख्नु पर्नेछ ।
ङ) स्वास्थ्य प्रतिकुल भए विद्यार्थी घरमा राख्ने, हिडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने र थप ईन्भेस्टिगेसनका लागी स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्क गर्ने ।
च) विद्यालयमा स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन के कसरी गरे वा नगरेको, कक्षा कोठा वा सिट प्लानिङ्ग, पठनपाठन कार्य-तालिका अभिलेखित गर्ने र अनुगमन गरी आवश्यक परामर्श दिने ।
छ) अपरिचित व्यक्ति वा विदेशबाट आएको वा कोरोना संक्रमण भएको क्षेत्रबाट आए वा विद्यार्थीको सम्पर्कमा आए तुरुन्त विद्यालयमा जानकारी दिने।
१) नेपाल सरकार शिक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रारम्भिक मापदण्ड , निर्देशन अनुसार पठनपाठन कार्य सुरक्षित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति,शिक्षक अभिभावक संघ, प्याब्सन, शिक्षक सम्बन्धित संघ संगठन, वडा समिति जिम्मेवारी गरी सामुहिक जिम्मेवारी र दायित्वबोधका साथ कार्य गरिनेछ ।